प्रवास Achives| Page2of 44
काठमाडौं । हवाई भाडाका विषयमा एकपछि अर्को निर्णय गर्दै आएको सरकारले व्यवस्थापनको विषयमा स्पष्ट निर्णय नगर्दा उद्धार उडान अनिश्चित भएका छन् । विभिन्न २५ सहरको तालिका सार्वजनिक गरे पनि तयारी नपुगेकाले सोमबार र मंगलबारका उडान नहुने भएका छन्, त्यसपछिका उडानको पनि टुंगो छैन । सरकारले …
उद्दार भन्दै चर्को हवाई भाडा अशुल्दै सरकार, कल्याणकारी कोषको छ अर्ब खर्च गर्दा हुन्न ?
काठमाडौं । रोजगारी गुमाएर विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धारका नाममा सरकारले नियमितभन्दा तीनगुणासम्म बढी हवाईभाडा असुल्ने योजना बनाएको छ । जब कि श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम ६ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । सरकारले ३२ जेठदेखि …
विदेशमा अलपत्र ५११ नेपालीको उद्धार, हालसम्म कुन देशबाट कति आए स्वदेश ?
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले बिहीबारसम्म विदेशमा अलपत्र परेका ५०० भन्दा बढी नेपालीको उद्धार गरिएको जनाएको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्तका अनुसार बिहीबार मात्र कुवेत सरकारको सहयोगमा २९९ नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । अध्यक्ष पन्तका अनुसार कुवेतको घर …
विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीसँग दोब्बर हवाई भाडा, नेपाल आउन ऋण खोज्नुपर्ने बाध्यता
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीपछि विदेशमा रोजगारी गुमाएका, गर्भवती, सुत्केरी तथा बिरामीलाई उद्धार गर्न सरकारले दोब्बर बढी हवाई भाडा लिन पाउने निर्णय गरेको छ । विदेशबाट उद्धार गर्ने श्रमिकको हवाई भाडा दर परराष्ट्र र पर्यटन, संस्कृति, नागरिक तथा उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले निर्धारण गरेका …
कुवेतबाट १५७ जना महिला कामदारहरु लिएर जहाज आइपुग्यो
काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई ल्याउने क्रममा कुवेतबाट १५७ महिला कामदारलाई लिएर बिहीबार एउटा जहाज काठमाडौं आइपुगेको छ । कुवेतबाट स्थानीय समयअनुसार बिहान ४ बजे उडेको सो जहाज भर्खरै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो । कुवेतबाट आएको यो …
जेठ ३२ देखि असार ११ भित्र २४ हजारको उद्दार गरिने, नेपाली र विदेशी जहाजले दैनिक १० उडान भर्ने
काठमाडौं । सरकारले ६७ उडानमार्फत पहिलो चरणमा २४ हजार नेपालीको उद्धार गर्ने भएको छ, नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालयले ४३ उडान गर्नेछन् भने विदेशी एयरलायन्सले २४ उडान गर्नेछन्, उद्धार उडानको भाडादरसमेत तय गरिएको छ । सरकारले आगामी ३२ जेठ आइतबारदेखि ११ असारसम्म विदेशमा …
बेलायतबाट फर्किन तयार भए ३९१ नेपाली, विवरण नेपाल पठाइयो
लण्डन । बेलायतबाट नेपाल फर्कन जरुरी रहेका ३९१ जनाको विवरण सोमबार नेपाल पठाइएको लण्डनस्थित नेपाली दूतावासले बताएको छ । बन्दाबन्दीका कारण नेपाल फर्कन नपाएकाहरूको विवरण सङ्कलन गरी दूतावासले काठमाडौँ पठाएको दूतावासका प्रवक्ता शरदराज आरणले बताए । दूतावासको पहलमा गठन गरिएको सूचना सङ्कलन समितिमार्फत …
विदेशमा अलपत्र नेपालीहरुलाई ल्याउने सरकारी योजना अलपत्र
काठमाडौं । विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग र अन्तरमन्त्रालय समन्वय नहुँदा विदेशमा रहेका नेपाली फर्काउने प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । एक खेप नेपाली युनाईटेड अरब इमिरेट्स (युएई) र म्यानबारबाट आएपछि दैनिक पाँच उडानमा नेपाल फर्काउने भनेको सरकार दुई दिन भयो फर्काउन सकेको छैन। कुवेत र …
विदेशमा रहेका नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमण कमी, हालसम्म १२५ जनाको मृत्यु
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण विदेशमा रहेका नेपालीको मृत्यु र सङ्क्रमणको दर उल्लेख्य कमी आएको जनाएको छ । शनिबार साँझसम्म विदेशमा १२५ जनाको सो सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको र पाँच हजार ५९० जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् । सङ्क्रमण …
नेपाल फर्कन चाहनेलाई विवरण बुझाउन राजदूतावासले गर्यो अनुरोध
लण्डन । नेपाल फर्किनुपर्ने बाध्यतामा रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासले आह्वान गरेको छ । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को यही जेठ १२ गतेको निर्णयबमोजिम ‘कोभिड–१९ विश्वव्यापी सङक्रमणका कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण …